Daily Technical Analysis | FXCC
KUCHENGA KUKURUKURA KUKURUKURA: Zvinyorwa zvenyaya iyi ndekukurukurirana kwekutengeserana, uye kwete yekuzvitsvaga kutsvaga kutsvakurudza. Sezvo zvakadaro, mitemo yepamutemo uye yekutonga maererano nekutsvaga kwekutsvaga kwekutsvaga kwekutsvaga hakushandisi pane izvozvi uye haisi pasi pekudziviswa chero kupi zvayo kubatanidzwa mberi kwekuparidzirwa kwayo.
Nyaya yacho ndeyekuti vanhu vawane ruzivo rwemashoko chete (ingave kana kwete iyo inotaura chero maonero). Hazvifungi nezvemamiriro ako ega kana zvinangwa. Hapana chiri munyaya iyi (kana kuti inofanira kuonekwa seyo) mutemo, mari, kubhadhara kana mamwe mazano pamusoro pokuti kuvimba kunofanira kuiswa sei. Hapana maonero anopiwa mumashoko acho anopa kukurudzirwa neFXCC kana munyori kuti chero ipi zvayo yekutsvaga, kuchengeteka, kutengesa kana nzira yekutsvaga mari inokodzera chero munhu upi zvake.
Kunyange zvazvo ruzivo rwunotsanangurwa mukukurukurirana kwekutengeserana kunowanikwa kubva kune zvinyorwa zvinotendwa kuti ndezvakavimbika, FXCC haina kuita chivimbo chekuti yakarurama kana kuti yakakwana. Zvose zvese zvinoratidza uye zvinoshanduka kuchinja pasina chiziviso uye zvingave zvisina nguva panguva ipi zvayo. Hapana FXCC, kana munyori wenyaya iyi achava nemhosva ye kurasikirwa chero kupi zvayo kwaunogona kuitisa, kana zvakananga kana kuti zvisina kurongeka, zvichibva kune upi zvake wekutsvaga huchishandisa chero ruzivo rupi zvarwo rurimo.
Izvi zvinyorwa zvinogona kusanganisira matanho ekuratidza midziyo yezvemari 'kushanda kwekare uye pamwe nekufungidzirwa nekufanotaurwa. Chero humwe ruzivo rwakabatana nekushanda kwekare kwekutsvaga hazvirevi kuti huchaita basa remangwana.
Kunze kwekunge zvataurwa zvimwe, mutengo unoshandiswa mumuenzaniso ndeyomutengo weFXCC, uye kwete wevanhu vatatu.